China Custom Carbide Bush uye Sleeve Kugadzira uye Fekitori N & D Carbidhi
Tsika Carbide Bush uye Sleeve
Tungsten carbide gwenzi ruoko rinoratidza kuomarara uye inopfuura simba kubvaruka simba, uye ine yepamusoro kuita pakuramba abrasion uye ngura, izvo zvinoita kuti igone kushandiswa mumaindasitiri mazhinji.
Tungsten carbide bushing inonyanya kushandiswa kutsika uye kutambanudza. Iine hunhu hwekupfeka kuramba uye kukanganisa kuramba. Ndiyo inotsigira zvikamu zvinoshandiswa mune zvemuchina zvikamu, kuitira kuti uwane kuiswa chisimbiso, kupfeka dziviriro uye mamwe mabasa.Mumunda wevharuvhu kunyorera, iyo tungsten carbide bushing iri mubhoneti uye ndiyo ngura-isingagadzirise zvinhu zvekuisa chisimbiso. munda wekushandisa kwevhavha, iyo tungsten carbide bushing iri mubhoneti uye ndiyo ngura-isingagadzirise zvinhu zvekuisa chisimbiso.
Iyo tungsten carbide gwenzi ruoko ichashandiswa zvakanyanya kutenderera rutsigiro, kuenzanisa, anti-kukanda uye chisimbiso che ekisero yemota, centrifuge, mudziviriri uye separator wepombi yemvura yakanyura mune yakashata mashandiro ezvinhu eakanyanya kumhanya anotenderera, jecha kupwanya abrasion uye gasi ngura mumunda wemafuta, senge masiraidhi anotakura ruoko, mota ekisero ruoko uye chisimbiso ekisero ruoko.
Basa hombe re cemented tungsten carbide bush sleeve inova mhando ye tungsten carbide chikamu, ndechekuti inogona kushandiswa sechikamu chekudzivirira chemidziyo. Mukuita kwebasa, tungsten carbide bushing inogona kudzikamisa kupfeka pakati peiyo yekutakura nemidziyo.
Tungsten Carbide Bushes / sleeve anonyanya kushandiswa seJig Bushes, Gwara Mabhushi, Flux Kuputira, Kupfura Blasting & dzimwe nzvimbo dzakawanda sekupfeka kuramba chikamu mumaindasitiri akasiyana siyana. Isu tinopa Plain pamwe neDanho Bushes ane akasiyana masize & akasiyana maumbirwo zvichienderana nezvinodiwa zvako.
Pashure: Tungsten Carbide ekisero Sleeve
Zvadaro: Tungsten Carbide Flat Seal Mhete yeMechanical zvisimbiso